Maqaallada Jeff Kupietzky on Martech Zone |
Maqaallada by Jeff Kupietzky
Si ay u soo jiidato saxiixyada iimaylka, daabacayaashu waa inay ku caddeeyaan kartidooda shakhsiyaynta ee saxeexyada macnaha guud
Jimce, Maarso 4, 2022 Jimce, Maarso 4, 2022 Jeff Kupietzky
Warshadaha daabacaadda ayaa u muuqda inay ku socdaan dhammaan awoodda wargeysyada iimaylka si ay uga qaybgalaan dhagaystayaasha oo ay u wadaan ganacsi. Marka hore, Axios waxa ay ku dhawaaqday dib Sebtembar in ay ballaarinayso tebinta wararka maxalliga ah iyada oo la bilaabay siddeed wargeysyo gaar ah oo magaalada ah. Hadda, The Atlantic ayaa ku dhawaaqday bilaabista shan email oo cusub, marka lagu daro in ka badan darsin kale oo khaas ah oo iimayl ah oo horeyba loo wareegay. Waxa kuwan iyo daabacayaal kale oo badan ay og yihiin waa iimaylkaas la beegsaday
Daabacayaasha: Paywalls waxay u baahan yihiin inay dhintaan. Waxaa jirta Dariiqo Wanaagsan oo Lacag Looga Sameynayo
Jimco, Nofeembar 19, 2021 Jimco, Nofeembar 19, 2021 Jeff Kupietzky
Paywall-yadu waxay noqdeen wax caadi ah daabacaadda dhijitaalka ah, laakiin waa kuwo aan waxtar lahayn oo caqabad ku ah saxaafadda xorta ah. Taa baddalkeeda, daabacayaashu waa inay isticmaalaan xayaysiis si ay uga shaqeystaan ​​kanaalo cusub oo ay u siiyaan macaamiisha waxa ay u rabaan lacag la'aan. Dib ugu noqoshada 90-meeyadii, markii daabacayaashu bilaabeen inay u guuraan nuxurkooda khadka, waxaa soo baxay xeelado kala duwan: kaliya cinwaannada ugu waaweyn qaar, daabacado dhan kuwa kale. Markii ay dhiseen joogitaan shabakad, nooc gebi ahaanba cusub oo dhijitaal ah-kaliya
Istaraatijiyadaha Tiknoolajiyadda 3 ee ugu sarreeya ee daabacayaasha 2021
Talaado, Maarso 30, 2021 Isniin, Maarso 29, 2021 Jeff Kupietzky
Sannadkii la soo dhaafay wuxuu ku adkaaday daabacaadda. Marka la eego fowdada COVID-19, doorashooyinka, iyo jahwareerka bulshada, dad badan ayaa cunay warar iyo madadaalo badan sanadkii la soo dhaafay si ka badan sidii hore. Laakiin shakiga ay ka qabaan ilaha bixinaya macluumaadkaas ayaa sidoo kale gaadhay heerkii ugu sarreeyay abid, maaddaama oo ay sii kordhayaan qulqulatooyinka been-abuurka ah ay kalsoonida ku saareen warbaahinta bulshada iyo xitaa matoorada raadinta si ay u diiwaan geliyaan hoos u dhac. Dhibaatada ayaa leh daabacayaal dhammaan noocyada mawduucyada halgamaya
Isniin, November 16, 2020 Isniin, November 16, 2020 Jeff Kupietzky
Sida suuqleyda, waxaan ognahay in kaqeybgalinta dhagaystayaasha saxda ah fariinta saxda ah kanaalka saxda ah ay muhiim tahay, laakiin sidoo kale aad iyo aad u adag. Iyada oo leh wadiiqooyin iyo barnaamijyo fara badan - laga bilaabo warbaahinta bulshada illaa warbaahinta soo jireenka ah - way adag tahay in la ogaado halka lagu maalgelin karo dadaalkaaga. Iyo, dabcan, waqtigu waa kheyraad kooban - had iyo jeer waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo (ama aad sameyn karto), marka loo eego waqtiga iyo shaqaaluhu inay sameeyaan. Daabacayaasha dijitaalka ah ayaa dareemaya cadaadiskan